Toko tapaka… | NewsMada
Toko tapaka vilany mitongilana… Hivoaka anio ny voka-pifidianana ofisialy hambaran’ny etsy Ambohidahy. Mandeha ny tombana fa tsy hifanalavitra amin’ny efa nambaran’ny eny Alarobia ny vokatra izao maraina izao. Mety hiseho ny fanafoanana voka-pifidianana tatsy na taroa noho ny tsy fahatomombanana… Efa faheno sy fahita izany nefa tsy hampiova be firy ny elanelana eo amin’ireo mpifanandrina roa voalohany na koa ireo aoriany. Tokony hahazaka resy ireo tsy tafita amin’ny dingana manaraka. Fandalana ny demokrasia izany ary foto-pisainana tokony hananan’ny mpanao politika. Miandry ny fifidianana depiote amin’ny herintaona na ny ben’ny Tanàna na koa fifidianana filoham-pirenena afaka dimy taona indray ireo resy.
Aoka anefa tsy atao fialana bala ny lesoka hita sy niseho tamin’ny fihodinana voalohany. Efa fahita sy miseho hatrany izany. Tsy maintsy misy ny mpandresy sy ny resy ary ny tena raraka tanteraka amin’ny elanelana be eo amin’ny samy mpifaninana. Efa nomen’ny lalàna zo hampiakatra fitoriana eny Ambohidahy ireo nahita fa tena nisy ny tsy azo leferina na tranga tena nihoa-pefy… Tokony hiandry am-pitoniana ny valiny sy ny tohiny isika. Tsy tokony ho vitavita mora koa anefa ny tsy fanarahan-dalàna nataon’ny tompon’andraikitra sasany hita nibaribary fa nanao ny tsy mety na nihoa-pefy. Fotoana izao hanasaziana azy ireny. Tsy fahita na tsy faheno teto amintsika izany nigadra noho ny olana tamin’ny fifidianana izany na nibaribary izao aza fa tena tsy nanara-dalàna.
Ho an’ny fikarakarana kosa, efa hita ny lesoka sy ny tsy fahatomombanana. Manana ny tandrify azy ny tsirairay ka tokony hahay haka lesona. Mbola hiatrika ny fihodinana faharoa isika ka tokony havahana ny tsiparifary amin’ny vary amin’ireo tompon’andraikitra isan-tokony. Efa tsara ny fepetra noraisin’ny teny Alarobia nanala ny mpiasany nanao ny tsy mety… Toko tapaka, vilany mitongila ka ny tsy mety arenina. Mba ho tsaratsara kokoa no ho ny teo aloha ary hadio na tsy tena tanteraka aza ny hatrehintsika amin’ny 19 desambra…
Behoririka: un homme chute du haut du pont 02/08/2021
Evasion à Betroka: un agent pénitentiaire incarcéré 02/08/2021
Rotary club d’Ivato: Andry Navalona Andriamiarintsoa à la présidence 02/08/2021
Protection de l’environnement: le Medd et les scouts se donnent la main 02/08/2021
Journée de la femme africaine: Madagascar mise sur l’autonomie de la femme 02/08/2021